श्रीलंका र बंगलादेश सेमिफाइनलमा,नेपाल बाहिरियो! | Hamro Khelkud
श्रीलंका र बंगलादेश सेमिफाइनलमा,नेपाल बाहिरियो!
एजेन्सी – नेपाल एसीसी यू१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताबाट एक खेल अगावै समुह चरणबाटै बाहिरिएको छ । आईतबार घरेलु टोली श्रीलंकाले यूएईलाई ५२ रनले पराजित गरेसँगै नेपाल औपचारिक रुपमा बाहिरिएको हो ।
समुह बी बाट दुबै खेल जितेका बंगलादेश र श्रीलंका सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । लगातार दुबै खेलमा पराजित भएका नेपाल र यूएई बाहिरिएका छन् । त्यस्तै समुह ए बाट भारत र अफगानिस्तान लगातार दुबै खेलमा जित निकाल्दै शनिबार नै सेमिफानइनलमा पुगि सकेका छन् । दुबै खेल हारेका पाकिस्तान र कुवेत बाहिरि सकेका छन् ।
सोमबार भारत र अफगानिस्तान खेल्ने छन् । जसबाट समुह ए को विजेता र उप विजेताको टुङ्गो लाग्ने छ । त्यस्तै मंगलबार श्रीलंका र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । जसबाट पनि समुह बी को विजेता र उप विजेताको टुङ्गो लाग्ने छ । सेमिफाइनल बिहीबार हुने छ । समुह ए को विजेताले समुह बी को उप विजेतासँग पहिलो सेमिफाइनल खेल्ने छ । दोस्रो सेमिफाइनलमा समुह ए को उपविजेताले समुह बीको विजेतासँग खेल्ने छ । फाइनल सनिवार हुने छ ।
आज पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ६ विकेटले पराजित हुँदा अर्को खेलमा श्रीलंकाले यूएईलाई ५२ रनले पराजित गर्यो । श्रीलंकाले प्रस्तुत गरेको ३ सय २७ रनको लक्ष्य यूएईले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै २ सय ७४ मात्र बनाउन सक्यो । नेपालले अन्तिम खेल यूएईसँग मंगलबार खेल्ने छ । नेपाल पहिलो खेलमा श्रीलंकासँग ५ विकेटले पराजित हुँदा यूएई बंगलादेशसँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो ।